विदेशमा श्रीमान « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 27 September, 2019 4:15 pm
विवाह गरेको केही दिनमै विदेश गएको श्रीमान घर फर्किने टुंगो हुँदैन । महिलामा यौन चाहना उमेरको हिसाबले समेत बढिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिला होस् या पुरुष जोकोही विपरीत लिंगीप्रति आकर्षित हुनु स्वभाविक हो । पछिल्लो समय गाउँगाउँमा समेत प्रविधिको पहुँच भएको हुनाले आफ्नो चाहनालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा श्रीमान श्रीमतीले छलफल गर्न सक्छन् ।
महिला त अलि बढी नै स्वतन्त्र भइसके त । महिला मुद्दाका कुराकानी चल्दा आउने यस्ता भनाइको ईशारा अहिले जोकोही व्यक्तिले सजिलै बुझ्न सक्छ । नेपाली समाजमा अहिले श्रीमान विदेश गएको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ । विवाहेत्तर सम्बन्ध अहिले गाउँमा कुराकानीको खुराक बनिरहेका छन् । श्रीमान विदेशबाट आउँदा श्रीमती सम्पत्ति लिएर अर्को पुरुषसँग हिंडेका खबर राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार बनिरहेका छन् ।
नेपाली समाजले वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई सबैभन्दा उत्तम विकल्पको रुपमा लिइरहेको छ । गाउँमा अहिले कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको परिवार भेट्न मुस्किल हुन्छ । सामाजिक संरचना अनुसार, घरको आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषले हेर्ने भएका कारण महिलाको तुलनामा बढी पुरुष वैदेशिक रोजगारीको लागि हिंडिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको यो लहरले एकातिर रेमिट्यान्स भित्रिएतापनि देशको समृद्धिको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति बाहिरिएको छ । अर्कोतिर पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक विकृति बढ्यो भन्ने आवाज उठिरहेका छन् । आम मानिसको मानसिकता, सामाजिक संजालदेखि लिएर चलचित्रमा समेत बिखण्डन तथा विकृतिको जिम्मेवार महिलालाई मानिएको छ ।
पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक विकृतिलाई समाचार, सामान्य कुराकानी, चलचित्रको चित्रण जसरी देखिएको होस्, त्यहाँ महिलालाई दोषी मानिएको हुन्छ । उसको क्रियाकलापलाई ’छाडापन’ मानिएको हुन्छ । पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक विकृति के महिलाको छाडापनकै नतिजा हो ?
विवाहमा एक अर्कालाई जीवनभरको साथीको रुपमा चुनिन्छ । तर हाम्रो समाजमा महिलाको लागि वैवाहिक सम्बन्ध एउटा औपचारिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । जसमा उसले आफ्नो जीवनसाथीलाई ’भगवान’ बराबर मान्नुपर्छ । उसको चाहना अनुसार चल्नुपर्छ । यसले गर्दा महिलाका आफ्ना चाहना दबिरहेका हुन्छन् । सुशील र संस्कारी बुहारी, श्रीमती प्रमाणित गर्नको लागि उसले आफूलाई निश्चित घेराबन्दीमा बाँध्नु परिरहेको हुन्छ । श्रीमानलाई साथी नभई भगवानको रुपमा मान्नुपर्दा उसले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दिन । ऊ आफू निस्फिक्री बोल्न सक्ने ठाउँको खोजीमा हुन्छे ।
पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा विदेशमा रहेका युवा केही दिनको छुट्टीमा नेपाल आउँछन् र नेपालको परम्परागत सामाजिक चलन अनुसार विवाहको लागि योग्य केटी खोज्न हिंड्छन् । केही दिनको छुट्टीमा अपरिचित व्यक्तिलाई खोजेर, विवाह गरेर, दुई चार दिन सँगै बसेर विदेश हिंड्दा उनीहरुले एकअर्कालाई कति बुझ्न पाउलान् ? एक अर्काको बानी व्यहोरालाई कसरी स्वीकार्लान् ? अर्कोतर्फ, महिला कम उमेरको र पुरुष बढी उमेरको खोज्ने चलनले विदेश गएका युवा नेपाल आएर आफूभन्दा निकै कम उमेरकी केटी खोज्न थाल्छन् । यस्तो अवस्थामा दुवैको सोचाई नमिल्नु, परिपक्कता नहुनु, दुवैका योजना तथा चाहना नमिल्नु स्वभाविक हो । र, यो बढ्दै गएर पारिवारीक विखण्डनको एउटा कारण बन्न पुग्छ ।
महिलाको सुन्दरता र उसप्रति पुरुषको आकर्षणलाई उसको योग्यता मानिन्छ भने धेरै महिलालाई ’घुमाउन’ सक्ने पुरुषलाई ’मर्द’ मानिन्छ । यस्तो मानसिकता बोकेको समाजमा हुर्किएका उनीहरु आफ्नो योग्यता मापन गर्न चाहन्छन् र त्यसैकारण भयानक परिस्थिति सिर्जना हुन्छन् ।
महिला र यौन
नेपाली संस्कारमा, सामाजिक संरचनामा यौनको आवश्यकता र महत्व केवल पुरुषको लागि भन्ने रुपमा चित्रण गरिएको छ । यौनलाई लिएर महिलाको चरित्रको मापन गरिन्छ । श्रीमान अर्थात् वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेपछिको उसको यौन साथीको अगाडि ऊ आफूलाई संस्कारी, राम्रो चरित्रको प्रमाणित गर्नको लागि लज्जालु बन्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा उसले यौन सम्बन्धि आफ्नो चाहना र धारणा श्रीमान सामु खुलेर राख्न सक्दिन । उसले आफूलाई समर्पण गरिरहेकी मात्र हुन्छे । उसका चाहना, उसको यौन स्वतन्त्रता कुण्ठित भइरहेको हुन्छ । जब व्यक्ति कुण्ठित हुन्छ, तब ऊ या त निराशामा धकेलिन्छ या त त्यो अभिव्यक्त गर्ने ठाउँको खोजी गर्छ ।
अर्कोतर्फ, विवाह गरेको केही दिनमै विदेश गएको श्रीमान घर फर्किने टुंगो हुँदैन । महिलामा यौन चाहना उमेरको हिसाबले समेत बढिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिला होस् या पुरुष जोकोही विपरीत लिंगीप्रति आकर्षित हुनु स्वभाविक हो । पछिल्लो समय गाउँगाउँमा समेत प्रविधिको पहुँच भएको हुनाले आफ्नो चाहनालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा श्रीमान श्रीमतीले छलफल गर्न सक्छन् । यसको लागि श्रीमान श्रीमती दुवै बीच साथीको जस्तो सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ ।
पछिल्लो पिंढीका महिला पुरुषले आधुनिकतालाई महँगो जीवनशैलीको रुपमा बुझेका छन् । घरायसी काम गर्न नआउनु, आफूसँग महँगो मोबाइल, चस्मा हुनु, लुगा हुनुलाई उनीहरुले आफ्नो उपलब्धि ठानेका छन् ।
नेपाली समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक छ । गाउँको सानोदेखि ठूलो काम हरेकमा निर्णय तहमा पुरुषहरु हावी छन् । गाउँमा अझै पनि महिलाको बोलीलाई ’पोथी बास्नु’ र ’आइमाईका कुरा’ को रुपमा लिइन्छ । त्यसैले कुनै काम सम्पन्न गर्न होस् या आफ्नो आवाज सुनियोस् भन्ने उद्देश्यले होस् महिला कुनै पुरुषको सहारा लिन खोज्छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पुरुषले त्यसलाई आफ्नो यौन कुण्ठा निकाल्ने अवसरको रुपमा लिन्छ भने कुनै महिलाले त्यसलाई आफ्नो हतियारको रुपमा लिन्छन् । कुनै महिला आफूलाई सहारा दिने व्यक्तिसँग आकर्षणमा पर्न सक्छन्, जसले विवाहेत्तर सम्बन्धलाई निम्ता दिन्छ ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो समाजले महिलालाई एउटा खेलौनाको जसरी चित्रण गरेको छ । महिलाको सुन्दरता र उसप्रति पुरुषको आकर्षणलाई उसको योग्यता मानिन्छ भने धेरै महिलालाई ’घुमाउन’ सक्ने पुरुषलाई ’मर्द’ मानिन्छ । यस्तो मानसिकता बोकेको समाजमा हुर्किएका उनीहरु आफ्नो योग्यता मापन गर्न चाहन्छन् र त्यसैकारण भयानक परिस्थिति सिर्जना हुन्छन् ।
संस्कार र वातावरण
हामी हुर्किरहेको संस्कार तथा वातवरणले महिला र उसको श्रीमानको परिवार बीचको सम्बन्धलाई पिडित र पीडकको रुपमा चित्रण गर्छ । टेलीचलचित्र, चलचित्रमा समेत बुहारी र परिवारका अन्य सदस्य बीच द्वन्द सिर्जना गरिएको हुन्छ । उक्त संस्कार तथा वातावरणमा हुर्किएका पछिल्लो पुस्ताका महिलाले समेत श्रीमानको परिवारलाई आफ्नो विपक्षी मानिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, समाजमा अझै पनि केही परिवारले बुहारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा श्रीमानले दुई जना बीच मध्यस्थकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्छन् । श्रीमान विदेश गएपछि ती दुई पक्ष बीचको दूरी बढ्न थाल्छ । जसले गर्दा पारिवारिक विखण्डनको स्थिति सिर्जना हुन थाल्छ ।
त्यस्तै, हाम्रो संस्कारमा घरको आर्थिक कारोबार सम्बन्धि काममा छोरीलाई टाढा राख्ने चलन छ । जुन व्यक्तिले घरमा आर्थिक पक्षबारे बुझेको हुँदैन, जो ती कुराबाट सधै टाढा राखिएको हुन्छ, उसले विवाहपछि एकैपटक त्यो जिम्मेवारी निभाउँदा उसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ?
अर्कोतर्फ, हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषबीच एउटा निश्चित दूरी बनाइएको हुन्छ । त्यही दूरीले उनीहरुलाई एकअर्काप्रति आकर्षण गरिरहेको हुन्छ । एकअर्कासँग नजिकिनुलाई उनीहरुले आफ्नो उपलब्धि मान्न थाल्छन् , चाहे ती अविवाहित हुन् या विवाहित ।
अधिकार र स्वतन्त्रता
पछिल्लो समय महिला अधिकार र स्वतन्त्रताका पक्षमा धेरै आवाज उठे, जसले गर्दा पछिल्लो पिंढीका महिलाले शिक्षा र रोजगारीमा अवसर पाएका छन् । तर, महिलाको जीवनको सफलता भनेकै विवाह र बच्चा जन्माउनु हो, भन्ने सामाजिक मान्यताले गर्दा यो अवसरलाई उनीहरुले उपभोग गर्न जानिरहेका छैनन् ।
गाउँमा १२ कक्षासम्म हरेकजसो घरका छोरीले पढिरहेका छन् । तर उनीहरुको नजरमा सफलता भनेको विदेश गएको श्रीमान पाउनु र स्वतन्त्रता भनेको पारिवारिक जिम्मेवारीबाट मुक्ति मिल्नु बनिरहेको छ । अधिकार भनेको लालपुर्जामा आफ्नो नाम हुनु हो, भन्ने मानसिकता उनीहरुमा हावी भएको छ । महिलाहरुले त्यो परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण भन्ने बुझिरहेका छन् भने अर्कोतिर पारिवारीक विखण्डन र पुरुष हिंसाका मुद्दा उठिरहेका छन् ।
समाजमा अहिले आधुनिकता र पढेलेखेको व्यक्तिको परिचय उसले घरको काम गर्न नजान्नुमा रहेको छ । र, पछिल्लो पिंढीका महिला पुरुषले आधुनिकतालाई महँगो जीवनशैलीको रुपमा बुझेका छन् । घरायसी काम गर्न नआउनु, आफूसँग महँगो मोबाइल, चस्मा हुनु, लुगा हुनुलाई उनीहरुले आफ्नो उपलब्धि ठानेका छन् ।
मोबाइल, ल्यापटपको उपयोगिता, आवश्यकताको राम्रो ज्ञात नहुँदै उनीहरु त्यसमा अभ्यस्त भए । जसले गर्दा त्यसले भयानक परिणाम निम्त्याइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाली समाजमा अहिले लगानीमा भन्दा बढी खर्चमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । आधुनिकता र सम्पन्नताको यो प्रतिस्पर्धाले परिवारमा मतभेद सिर्जना गरिरहेको छ ।
समाजमा निम्तिने परिस्थिति हाम्रै सामाजिक संस्कार, वातावरण र मानसिकताका उपज हुन् । कुनै पनि सामाजिक परिस्थितिको जिम्मेवार कुनै एउटा लिङ्ग, वर्ग या जाती मात्र हुँदैन । त्यसको जिम्मेवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा हामी सबै हुन्छौं ।